"အောင်အောင်...ချစ်သူက ဒီလို..." | အိမ်လွမ်းသူ...
"ချစ်သူလေးကို လွမ်းလို့ ဒီသီချင်းလေးကို တင်လိုက်တာပါ...! သီချင်းလေးကို နားထောင်ပြီးရင်မရယ်နဲ့ နော်
အားလုံးသီးခံပြီးတော့ နားထောင်ပေးသွားပါလို့ ပြေားပါရစေ...!လာရောက်လည်ပတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ကိုယ့်ချစ်သူကို လွမ်းမှာပဲနော်...! သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးအလွမ်းများနှင့် ကင်းဝေးပါစေ...!အားလုံးနားပူခံပြီး နားထောင်းပေးတာ ကျေးဇူး...!အခုလို ဒီသီချင်းလေးကို သီဆိုထားတဲ့ အဆိုရှင်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါ၏..."^ှဝ^ု ^ှဝ^ု
5 Response to "အောင်အောင်...ချစ်သူက ဒီလို..."
သီချင်းကြိုက်သူမို့လားမသိ သီချင်းဆိုအကုန် နားထောင်တယ်။ ဂျောက်ဂျက်ကလွဲရင်ပေ့ါ... သီချင်းလေးက နားထောင်ရ အတော်ကောင်းသား။
ခံစားချက်တွေများနေရင် အခုလို ရင်ဖွင့်လိုက်တော့ပေါ့သွားရော ...
ညီမလေး လမင်း ရေ... သူများတွေထုတ်ကြွားတာဟုတ်ဘူး....
မဏ္ဍပ် တိုင်တက်ပြနေတာ ဟ :P .... အင်း လွမ်းစရာရှိတဲ့
သူများကျတော့ လွမ်းလိုက်ကျတာ ... တို့ များကျတော့ ဘာပြော
ရအမှန်းကို မသိ ဘူး... ထီပေါက်ပြီး လက်မှတ်ပျောက်နေသလိုပဲ :P
ကဲ အမြန်ဆုံး ဆုံဆည်းနိုင်ကြပါစေလို့ အကို ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ညီလေးရေ... ( အကိုလိုချင်တာလည်း ဒီဆုပဲ ဟ )
ဒီသီချင်းကို ကြားဖူးတာ ကြာလှပြီ